अब यसकारण राजा र सेना मिल्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन ! - Sidha News
अब यसकारण राजा र सेना मिल्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन !
काठमाडौं। अब राजा र सेनाहरु एक आपसमा मिल्नुपर्छ।राजा र सेनाहरु मिल्नु बाहेकको अरु कुनै विकल्प मैले देखेको छैन ।
पुष्पकमल दाहालले स्वतः मैले पाँच हजार मान्छे मा’रेको हो भनेर सामाजिक संजाल र मिडियामा आइरहेको छ का’र्वाही हुँदैन किन ? सर्वोच्च अदालतमा अग्नि सापकोटा विरुद्ध अर्जुन बहादुर लामा लाई मारेकोमा रिट पर्न गएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटा लाई कार्वाही गरेन किन ? सबभन्दा खराबी नै न्यायलयमा छ ।
न्यायलयको गलत निर्णयको असर जनमानसमा देखा पर्न थाली सकेको छ।नेताहरुलाई भने केही नहुने हामी सर्वसाधारणलाई मात्र कानुन ? सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका बुद्धिजीवी प्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु र वकीलहरु लाई मेरो दोस्रो प्रश्न नेपालमा अब तीस हजार मान्छे मार्नेको उदय भयो भने के गर्नुहुन्छ ? एउटाको देखासिकी अर्कोले गर्छ होइन र ? सत्र हजार मार्ने हरुलाई छुट दिने न्यायालयले पक्कै पनि तीस हजार मा’र्ने हरुलाई कसरी सजा’य दिन सक्छ ?
विक्रम सम्वत २०६२/०६३ साल पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभासदहरु, सांसदहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता ध’रापमा परेको छ । इतिहासमा नै विक्रम सम्वत २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्र’मणकाल अवस्था बाट चलेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई जग जाहेर नै छ ।
यसकारण राजा र सेनाहरु छिटो भन्दा छिटो मिलिजुली अब मुलुकको विकास निर्माणमा सराहनीय भुमिका खेल्नुपर्छ र मुलुकलाई सहि दिशा तर्फ लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। भुकम्प पी’डितहरुको नाममा आएको राहतहरु समेत पचाउन पछि परेनन । लु’टतन्त्र हो यो । हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग भयो सहि सदुपयोग भएन ।
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालीका– २